Gudoomiye yariisow ayaa la dardaarmay Ciidanka Ilaalada Deegaanka Xamar – Gedo Times
Gudoomiye yariisow ayaa la dardaarmay Ciidanka Ilaalada Deegaanka Xamar
30th March 2019 admin Wararka Maanta 0
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa kulan la qaatay saraakiisha Ciidanka Ilaalada Deegaanka Xamar (Munishiibiyo), isagoo kula dardaarmay in la dardargeliyo isla-xisaabtanka, si kor loogu qaado dhakhliyada Dawladda Hoose ee Xamar.
Guddoomiye Yarisow ayaa sheegay in Ciidanka Ilaalada Deegaanka looga fadhiyo sidii ay tallaabo uga qaadi lahaayeen dadka canshuuraha ku waajibay aan bixin, isla markaana loo baahan yahay in ganaaxyo adag la dul dhigo cid walba oo sharciga u hoggaansami wayda. Guddoomiyaha ayaa si adag ula dardaarmay in si adag wax looga qabto dadka wasaqda waddooyinka ku soo shuba, oo keena nadaafad darrada caasimada, sheegeyna in loo baahanyahay in sharciga lala tiigsado cid allaale iyo cidii ku xad-gudubta nidaamka.
Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in Maamulkiisa ay ka go’an tahay la dagaallanka Musuq maasuqa, cid walba oo ku xadgudubta hantida dadweynaha Soomaaliyeed tallaabo laga qaadi doono.
“Ciidanka Ilaalada Deegaanku waa muraayadii laga fiirinayay Gobolka Banaadir howlihiisa, waxaana la idin kaga fadhiyaa inaad u istaagtaan sidii kor loogu qaadi lahaa dhakhliyada kala duwan, tallaabana uga qaadi lahaydeen cid walba oo nadaafadda iyo bilicda Caasimadda wax u dhimaysa”
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa kormeer ku sameeyey Waaxda Dhalashada iyo sugnaanta iyo Guddigga Khilaafaadka, isagoo ku booriyey in ay laba jibaaraan howlaha ay shacabka Soomaaliyeed u hayaan.
Daawo:Wasiir Hore Siciid qoorsheel Mucaaradka way igu been abuurteen
Daawo:Xildhibaan Cabdiraxmaan Ayaa Sheegay In Baaqashada kulanka Maanta aysan Sababin Xildhibaanada Katirsan Wasiirada